NTỤKWU: Nnukwu ọdachi mkpuchi nuklia na nso nso! : Martin Vrijland
NKWU: Akwa mkpu nke ọdachi ụwa nuklia na nso nso!
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 11 March 2019	• 10 Comments
Mmetụta dị ukwuu nke ọdachi nuklia na-abịanụ na-echekwa na ọkụkụ kachasị ike na Europe ugbu a na-eche ugbu a iji bulie nnukwu mkpu! Ndị isi mgbasa ozi na-agbachi nkịtị banyere nke a, mana enwere egwu egwu niile. Ị maara ikike osisi nuklia dị na Borssele ma ọ bụ Tihange (Belgium)? Ị ma mmetụta dị ukwuu nke ụlọ ọrụ nuklia na-agbawa agbawa? Mgbe ahụ gee ntị!
Onye ọ bụla nọ n'elu 40 na-echeta ọdachi nuklia na Chernobyl 26 April 1986 dika ụnyaahụ. Ọdachi nuklia nke na-eche ugbu a bụ otu nke dị nso na ụlọ. Ya mere ọ dị mkpa ka ị nweta ozi a ngwa ngwa o kwere mee en dị ka o kwere mee oke! Wepụ ihe niile ị na-eme ugbu a ma mee ihe ugbu a! Ọ dị njọ! Ọ bụ gị ka ị na-e-mail, fax, na-ebipụta, na-ekesa ma na-ekesa nke a site na mgbasa ozi mgbasa ozi na onye ọ bụla ị maara.
Anyị na-ekwu okwu banyere ọdachi nke metụtara ndụ mmadụ n'ezie! Nsogbu nuklia nke mega n'ike! Otu ulo oru nuklia nke na-agbawa ihe na-eme ka 1 zaa ya: windo na uzo mechie ma banye n'ime ala ka o zoo! Ọdachi nuklia na osisi dị na Europe na-emepụta radiation radiation nke na-emetụta ihe oriri na mmiri ọṅụṅụ. Mmiri na-egbuke egbuke dị ike na nkeji ole na ole nke ị chọrọ ezigbo ikuku nuklia iji lanarị. Ụjọ nke iyi egwu na mberede nwere mmetụta dị ukwuu, n'ihi na ọ na-abịa site na nke abụọ ruo na-esote. Ọ bụ égbè eluigwe na mbara igwe na oku na-aga na redio na TV na-esonyere mkpuchi ikuku elu. Onye ọ bụla na-atụ ụjọ na ihe ọ ga-esi na ya pụta bụ nke a na-apụghị ịkọwapụta.
Otú ọ dị, ọdachi nuklia a na-abịa dị ka onye ohi n'abalị. Esemokwu nuklia a na-agagharị na nzuzo. Mkpu mkpu na-agbachi nkịtị ma ị ga-ehi ụra n'udo. Ọ bụrụ na ịnụrụ oku mberede site na igwe ọkụ nuklia na-agbawa taa, ị ga-agba ọsọ iji zoo. Otú ọ dị, gas na-egbu egbu bụ nke na-adịghị mma na enweghị mmasị; ihe nsi nke na-abanye n'ime ulo gi. ị gaghị achọpụta nsi ahụ ma ị na-eku ume na nwayọọ. Ma ọ na-emetụ gị n'obi n'obi gị. Ya mere ọ bụ otu ọdachi nuklia.
Ji nwayọọ nwayọọ na ahụ na òtù ahụ wakporo. Ị na-ebili ọzọ n'ututu. Onye ogbu a na-ewe oge ya. Ọ ji nwayọọ nwayọọ banye n'ime ndụ gị. Ị naghị ahụ ya ma lee anya gburugburu gị. Ọ dịghị onye gbara gị gburugburu ga-achọpụta. Ọ dịghị onye na-ama jijiji. Ọ dịghị onye ọ bụla yiri ka ọ na-agba ọsọ azụ ma na-enwe obi nkoropụ. Onye ọ bụla nọ jụụ na ikuku ikuku dị jụụ. Ọbụna redio na TV nọ jụụ. Lelee ndepụta ozi ọhụrụ kachasị ọhụrụ; ọ dịghị ihe yiri ka ọ dị njọ.
Oti mkpu yiri ihe efu, ma ọ bụghị! Nsogbu bụ na mmeghachi anya nke mmejọ nke ọdachi nuklia ga-eme ka ị daa. Ị gaghị achọpụta ọdachi nke na-agagharị. Ọdachi a dị nnọọ ụra. Nsogbu a na-agbasa site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ. A gaghị emeri ọdachi a site na redio na TV. Ha bụ ndị na-ekesa gas! Ndị mgbasa ozi, mgbasa ozi mgbasa ozi na mmegide a na-achịkwa bụ ndị na-ekpuchi ikuku nke gas blanket na-ekpuchi mba ahụ. Ha na-ekesa nsị nke ndị na-emepụta gas na Brussels na The Hague. Ha na-eme ka ị na-ehi ụra na-ekwu "anya mechiri ma na-ama ụda", "ihu igwe ga-adị mma taa."
Ọbụna ha na-eme gị ka ị soro na mmepụta usoro. Ị nwere ike ịme ntuli aka gị ma họrọ nchịkọta kasị mma maka mmepụta gas gasị. Ha wee hụ na nsi nke na-abanye n'ime oghere ụlọ gị na-esi ísì ụtọ ọbụna karị. Ọbụna ị nwere ike ịghọ onye na-azụ ahịa na netwọk na-ekesa gas na-emepụta ihe ma nweta ego gị n'ọrụ maka usoro ya. Na TV, ị ga-ahụ nkwurịta okwu banyere ísìsì kachasị mma na mmetụta akwara ọjọọ nke uto uto. Ọ bụ onye na-emepụta ihe na-enye gị mmetụta nke ịdị n'otu.
Anyị malitere ịhụ onye na-emepụta gas gas. Anyị malitere ikwere na ya. Anyị amaghị nke ọma ọ bụla, n'ihi na a mụrụ anyị na mba ebe onye na-emepụta gas gasị nọ n'ebe ahụ. Onye na-emepụta ihe mgbe niile. A na-enye anyị ndị nnọchianya ọhụrụ na ndị nduzi mgbe niile. Ọ dịla otú ahụ ruo ọtụtụ afọ. Mathijs van Nieuwkerkjes na-ere gas na-egbu egbu na redio, TV na akwụkwọ akụkọ. Ụlọ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ọhụrụ kachasị ọhụrụ ga-eji oge a kwụpụta gas na-egbu nsị site na nsị ma ọ bụ tastier. Nsị ọhụrụ ahụ na-atọ ụtọ ọbụna na-atọ ụtọ, na-enyekwa gị nsị.
Ebe ọ bụ na ụlọ nrụpụta ahụ chọrọ ịnọgide na-ere ihe dị mkpa nke ịdị adị, ọ na-eme ka ndị mmadụ nọ n'ime ụlọ ahụ na-atụ ụjọ. Ọ bụ ya mere ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-egosi mgbe niile na ọbụna ndị omempụ na-egbu onwe ha ọzọ na ngwá agha na ihe ike ndị ọzọ. Ọbụna ngwa ndị na-ekiri ihe na ngwaọrụ mkpanaka adịghị mma maka ndị omempụ ndị a dị ize ndụ. Akwụkwọ akụkọ, redio na TV na-egosi otú ndị nche nke ụlọ ọrụ gas na-esi eme ihe na-elezi anya ala ahụ nke ọma nakwa na ndị nọ n'ụlọ dị njikere ịkwụ ụgwọ dị ukwuu maka nchekwa a niile. Ka ọ dịgodị, ha na-aṅụ mmiri odo-edo edo ma na-ekiri ntụrụndụ na tube nlele ma ọ bụ na-aga nnukwu ụlọ ebe ndị na-emepụta ihe na-emepụta gas na-emepụta sweets. Ụlọ ọrụ gas na-egbu egbu dị mma maka ndị mmadụ. Ọ na-echekwa netwọk okporo ụzọ ma na-enye netwọk ọkpọkọ maka mmiri ọṅụṅụ niile, ihe ndị na-ekpuchi ọkụ na ihe ndị ọzọ.
Mgbe Agha Ụwa nke Abụọ gasịrị, ụlọ ọrụ gas na-egbu egbu bụ nanị onye nwere obere ego iji wughachi obodo ahụ. Mgbe ahụ, e nyere anyị ohere ịhọrọ ndị nduzi nke ụlọ ọrụ gas na-egbu egbu ka e kwere ka ha wughachi ala ahụ. Anyị nwere ike ịhọrọ site n'aka ndị dị iche iche site na ụlọ ọrụ gas gasị. Ka ọ dị ugbu a, ọ bụ ụmụ nwanne na ụmụ nwanne nna ma ọ bụ ndị ikwu nke ndị mbụ na-ekenye òkè na-enye ndị nduzi ụlọ ọrụ ahụ na ndị ọbịa dị mma. Ụfọdụ na-ekwu kpọmkwem ihe m na-eche, dịka ọmụmaatụ, ma mgbe ụfọdụ, ha siri ike maka ụlọ ochie ahụ. Nke ahụ bụ ezigbo nwoke! Ya mere mgbe ha na-akpọ m ka m gaa nhoputa ndi ochichi, ahọrọ m onye m kacha amasị. Ugbu a amaara m: ọ ga-abụ onye nnupụisi!
Anụwo m na onye na-emepụta gas na-egbu egbu nwere ọgụgụ isi nke na ha nwere ngalaba na-elegide ndị mmadụ anya. Nsi nke ụlọ ọrụ ahụ mepụtara na-eme ka ndị mmadụ na-agbaso mgbe niile, ma ha ka nwere ike ịrụ ọrụ ha dị ka ọ dị na mbụ. Ugbu a, e nwekwara ndị mmadụ chọrọ ọgwụ dị ukwuu nke gas na-egbu egbu. Ha na mberede na ekweghị na ndị a họpụtara ahọpụta nke ụlọ ọrụ ahụ. O yiri ka onye na-emepụta gas na-egbu egbu achọpụtawo ndị agbata obi gị ka ị lekwasị anya n'ihe. Ha na-ahazi ndọgharị onwe ha ka ndị mmadụ wee nwee ike ịfụ obere uzuoku.
Otú ọ dị, ọtụtụ mmadụ ugbu a na-adabere na akụrụngwa na usoro nke ụlọ ọrụ mmebi gas; ọtụtụ mmadụ nwere ọrụ metụtara of nyere site ụlọ ọrụ na-emepụta nsị na-egbu egbu, na ọ bụ ihe na-agaghị ekwe omume iche n'echiche ụlọ ọrụ gas na-egbu egbu kwa ụbọchị. Ọ bụ ya mere ndị mmadụ ji na-agbapụ maka ụlọ ọhụrụ maka ụlọ ọrụ ahụ na nsị aghọwo ihe na-atọ ụtọ karịa afọ. Ị nwere ike jiri ya tụnyere ụdị ecstasy.
N'oge ndị gara aga, ndị mmadụ nwere ike ịwụda ha na ntanetị ha ma mechie ụlọikwuu ahụ dum. Ụlọ ọrụ ahụ emeela ka nnukwu ndị agha na-eche nche. Ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-atụ ụjọ nke egwu ahụ na ha na-ekpuchi ihe ọ bụla na onye ọ bụla n'ebe nile. Ha na-eme nke a n'ihi na ha na-ekwu na e nwere ndị gbara ọchịchịrị ndị na-achọ ime mwakpo n'ebe a na n'ebe ahụ, ma n'ikpeazụ, nchekwa maka ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ntanetị na-arịwanye elu. Kedu ihe ha ga - eme ma ọ bụrụ na ndị nọ n'ụlọ kwụsịrị ịbanye na mass? Gini mere ndi mmadu n'ime ulo malitere ikwenye ma kwenye na ulo oru mmebi gas? Nke ahụ ọ bụ n'ihi na ha gbanwere isi na uto n'ụzọ dị otú ahụ na ha malitere ịmasị ya?
Ndị mmadụ na-emepụta onwe ha. Ugbu a ha na-adabere kpamkpam. Ha na-ahụkarị anesthetic na n'eziokwu na ọ dịghị onye si ọgbọ a nke maara ihe ọ dị ka ndụ n'emeghị nrịanya nke nsi ahụ.
Ma ee, anaghị m agba aka. M meziri ihe. Enweghikwa m akwụkwọ ntanetị ọzọ. N'ezie, mụ na ndị agbata obi m atụwo egwu, ndị na-adabere na ya, mana ọ ka dị anyị ụtọ na anyị na-ekiri tube. Ka m ga-ajụ onye agbata obi m ma ọ bụrụ na ọ chọghị ịwepụ nsị ahụ? Eleghi anya ọ ga-agbachakwa aka ya? Ee ee, nke ahụ bụ eziokwu: ọ na-arụ ọrụ maka ndị nche nke ụlọ ọrụ ahụ. Ka m ka ga-ajụ ya? Ọ bụ gas na-egbu egbu!
Gụọ isiokwu ndị dị na ebe nrụọrụ weebụ a na-adọ gị aka ná ntị n'ụzọ zuru ezu gbasara gas na-egbu egbu nke na-agbasa na njedebe gbasara gị. Gaa na saịtị ma chọgharịa site na isiokwu. Ị ga-ebili ma mee ihe ozugbo ma ọ bụrụ na ị mata ihe na-eme! Ị ga-agwa ndị ezinụlọ gị na ndị enyi gị ozugbo! Ma ị dịghị eme ihe ọ bụla. Ị na-ahọrọ ichere ruo mgbe ọnọdụ uwe ojii dijitalụ arụsila ike n'onwe ya na gị na ụmụ gị agaghịzi aga ebe ọ bụla. Ma ọ bụ ị chere na ọ ga-adị mma, ma ọ bụrụhaala na gị na ụmụ gị na-aga n'ihu na-arụ ọrụ maka onye na-emepụta ma ọ̄ bụ ọrụ ndị metụtara ya. Ị na-enyere aka wuru ụlọ mkpọrọ gị na nsị site na-agafe agafe. Oge maka ya mgbanwe!
Ihe mere Elon Musk si skynet, nanotech na ịgba ọgwụ mgbochi ga-aghọta Ascension
Kedu ka anyị ga-esi agbabi oke egwu a?
E wezụga ụgha, anyị na-amụta site na nwata na ịghara inwe afọ ojuju na usoro agụmakwụkwọ, kama iji ọnọdụ dịka okenye. Usoro ihe a na-agbaghara ndị mmadụ. Ịrụ ọrụ mmanye, ọrụ ịgba ọgwụ mgbochi ụgwọ, ụgwọ ọrụ ụtụ isi ... ịkwesịrị ịgbaso iwu ahụ, mana ndị nwere ike na ndị nwe obodo na-eleghara iwu na ụkpụrụ ndị ha anya.
Ọ bụrụ na ị hụ leta ole na ole m tinyere n'aka ndị ọka iwu, ị gaghị ekwenye na nke a bụ ọchịchị obodo. Oh yes ... mkpesa na-ekwe omume, mana ịbụ onye ziri ezi bụ akụkọ ọzọ.
Ya mere: Anyị enweghị ike ịka mkpesa na anyị ga-eme nke ọma ya!
Ọ bụrụ na nke ahụ ada ada, mgbe ahụ na ị bụ onye nzuzu, n'ihi na ọ bụ naanị ọgụgụ isi, nke nwere ike na-arụ ọrụ na-aga nke ọma ... ihe ziri ezi?
Onye ozo nke onye na-eme ka mmiri na-egbu egbu gharakwa ịrụ ọrụ na onye na-ewusi elu. Ka anyi hu ma anyi ka nwere ike ijide ndi di otua na ihe omuma anyi na usoro AI
Na mberede, enwere m ihe ọkpụkpụ, mbọ na akụrụngwa ... na-esote ọkpụkpụ abụọ na ihe ndị ọzọ dị n'oké ọhịa, gụnyere (axis). Ee, m makwaara otu esi eme nke a! Ikekwe ọ bara uru maka mgbe anyị zutere na Goelag, n'ihi na mgbe ahụ, anyị nwere ike ịnọdụ ala n'ebe ahụ, ma ọ bụrụ na ha anaghị ewere ya.
de.voetkliniek@telenet.be dere, sị:
Nke mbụ, aghaghị m ịgwa gị na ọ dị ka ị gaghị ama ọtụtụ ihe gbasara ya. Enwere ihe dị iche iche ehihie na abalị banyere iwu na iwu. Ọ bụ ya mere ọ ga-eji bụrụ ihe dị ịtụnanya ma ọ bụrụ na osisi nuklia gbawara. Usoro dị jụụ dị iche iche yana nchekwa. Mgbochi na mpaghara ahụ na-anaghị emetụta ọrụ ahụ ma ọlị. Site n'ụzọ, ọ bụrụ na ọ dabara m nke ọma, ndị Dutch bụ ndị na-emepụta ụgbọ mmiri na-emepụta ihe ma mara site na mmalite na mgbawa ndị a nọ n'ime ya (arụpụtaghị mma mmepụta) ma ka na-enyefe ya.
Mgbe ahụ, aghaghị m ịsị na eleghị anya ị gụchaa isiokwu ahụ ma ị ghọtaghị na m na-eji ihe atụ mee ihe dị iche iche.
Ihe atụ (site na Grik metaphora: ịnyefe; adjective: transferable or figurative; antonym: literal) bụ ụdị nke ihe osise, nke e nwere ngosipụta zuru ezu (enweghị nkwupụta).
Belgium hahaha! nsogbu / edinam / enweghị ngwọta 🙂
Nnukwu isiokwu ị na-etinye oge na nlebara anya na ya. N'ihe gbasara m, mgbanwe nke asap gbanwere, otu mba nke nwere ezi ochichi onye kwuo uche ya, ezigbo ikike mmadụ. Ma ee, dị ka m dere na mbụ, ndị nkịtị chọrọ ka ha bụrụ ndị ohu nke ndị a na-enyo enyo, ndị mpụga. Ndị mmadụ nkịtị na-echekwa akụkọ ndị ha mere na mbụ.
Netherlands zombiland, ala ọgwụ ọjọọ, porn, porn ụmụaka, mba ego ndị na-agba akwụna, otu mba kachasị anya na-enyo enyo, mba nke ji ụgwọ na-ejide mba ndị nwere ụgwọ na-ejide ya ma ghara ikwe ka ọ bụrụ mba ndị ihu abụọ dị egwu n'efu. Nke a na-agbanwe ma ọ bụrụ na ndị mmadụ na-enyo enyo na-enyefe ọnọdụ ha. Nke ahụ agaghị eme nke afọ ofufo. Mkpebi ntuli aka anaghị enyere aka.
Hahaha, echetara nke ọma ma kọwaa ya n'ụzọ mara mma!
Akwa mma dị ka "ọdachi nuklia", ịkpọte gị ọzọ n'ụzọ dị iche.
Dị nnọọ ka ọgwụgwọ iodine jupụtara na mmiri ọgwụ thyroid, anyị aghaghị ịhụ na mkpụrụ obi anyị jupụtara na eziokwu ka ikuku na-egbu egbu ghara inwe mmetụta.
Ị nwere ike ịchọta eziokwu a site na ịnakọta ozi n'èzí ebe nkasi obi gị na ime nyocha n'ime onwe gị.
N'ụzọ dị otú a, ị na-amụta ịba onwe gị mma ma mechara ghọọ onye na-esi na mpụga.
" Ikwesiri ịgụ nke a n'ụzọ dị jụụ na enwere ezigbo ihe mmụta na ndụ
Kpọọ ngwa ngwa! »
Nleta nile: 11.676.562